Myitter - Page 284 of 290 - Media and Entertainment
လွဲမှားတွေ အယူဆတွေ ပါ သမီး မွေးတိုင်းလည်း မိန်းမယုတ် မဟုတ်သလို သား မွေးတိုင်း မိန်မမြတ် မဟုတ်ပါဘူး….
သား မွေးတိုင်း မိန်မမြတ် မဟုတ်သလို သမီး မွေးတိုင်းလည်း မိန်းမယုတ် မဟုတ်ပါဘူး တချို့က ပြောကြတယ် ဘုန်းကံ မရှိလို့ သမီး မိန်းခလေး မွေးတာတဲ့ကျွန်မ တော့အဲ့ဒါကိုလက်မခံပါဘူးပေတေလေလွင့်ပြီး ဆိုးသွမ်းနေတဲ့သားတွေကို မွေးထားမိတဲ့ မိခင် တွေဆို ငါဟာမိန်းမမြတ်လို့ ဂုဏ်ယူနိုင်မယ် မထင်ပါဘူး။ သား ယောက်ျားလေး […]
ဘ၀မှာ ရေသယ်ရောင်းစားပြီးဖြတ်သန်းနေရပေမယ့် သီချင်းတွေနဲ့အတူ ဘ၀အမောတွေကို ဖြေဖျောက်နေရတဲ့ ချောင်းဦးက ကိုအောင်ငွေ မနက်​ခင်း အညာနွေနေပူပူမှာ သနပ်​ခါးပါးကွက်​ကြားလေလူး တွံတေးသိန်းတန်​ သီချင်းလေး တဟိုဟို စက်​ဘီးကယ်​ရီယာခုံ ဘေးတစ်​ဘက်​တချက်​မှာရေပုံးနှစ်​ပုံးချိတ်​ပြီး ရေလိုက်​ပို့နေတဲ့သူတယောက်​ရှိပါတယ်​ သူကတော့ ချောင်းဦးမြို့ က ရိုးသားပြီး သမာအာဇီဝ ကျကျရေရောင်း အသက်​မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနေတဲ့ တွံတေးသိန်းတန်​ ခရေဇီ […]
ကိုကိုယ်​တိုင်​​တောင်​ ပြန်​ငယ်​သွားချင်​မိတဲ့ မိုးရေထဲက အတုယူစရာ​ကောင်းတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့လုပ်ရပ်….
လူငယ်တွေအတွက် ကောင်းလွန်းလို့ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်… ဖခင်ဖြစ်သူ သက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။ ချေးယူလာတဲ့ ၄၅၃၃ ယွမ် ( ကျပ်ငွေ ဆယ်သိန်းခန့် ) သားလက်ထဲထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သားဖြစ်သူ အဲဒီပိုက်ဆံကို တုန်တုန်ရင်ရင်နဲ့ လက်ခံလုိုက်ပါတယ်။ သားဖြစ်သူ သိလိုက်တယ်။ ကျောင်းလခ ယွမ်ငွေ ၄၁၀၀ ကျပ်သွင်းပြီးရင် စားဖို့နေဖို့အတွက် ၄၃၃ […]
အိမ်ထောင်သက် (၃၈) နှစ်ရှိတဲ့တိုင် နေ့စဉ် အင်္ကျီဆင်တူ ဝတ်ကြတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံက စုံတွဲ…….
အိမ်ထောင်သက် (၃၈) နှစ်ရှိတဲ့တိုင် ထူးထူးခြားခြား နေ့တိုင်း အင်္ကျီဆင်တူပဲ ဝတ်ကြတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံက စုံတွဲအကြာင်း….. ဂျပန်နိုင်ငံက Tsuyoshi နဲ့ Tomi Seki ဆိုတဲ့ အဖိုးအဖွား စုံတွဲဟာ အိမ်ထောင်သက် (၃၈) နှစ်ရှိပါပြီ။ သူတို့က bonpon511 ဆိုတဲ့ အင်စတာဂရမ် အကောင့်ကို […]